Zoom တွင်မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်ကစားရန်အကောင်းဆုံးဂိမ်းများ🥇 Emulator.online ▷🥇
ကြောင့်လူမှုရေးဝေးကွာ၏ဤကာလ၌ Covid-19 ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည်ဗီဒီယိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများနှင့်အွန်လိုင်းအစည်းအဝေးများပြုလုပ်ရန်ရရှိနိုင်သည့်နည်းပညာကိုအသုံးပြုကြသည် အာရုံစူးစိုက်သို့သော်၊ ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများသည်ပျော်စရာပျော်စရာကောင်းသောအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပြီးသူငယ်ချင်းများ၊
ဒီတော့ဒီမှာကစားဖို့ကစားဖို့အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဂိမ်းအမြောက်အမြားကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။ အာရုံစူးစိုက် ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) နှင့်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲစရာမလိုပဲသူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ပလက်ဖောင်းမှရရှိနိုင်သောအသုံး ၀ င်သည့်အခမဲ့အင်္ဂါရပ်များကိုသုံးခြင်း၊ သင်၏တီထွင်ဖန်တီးမှုနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများအတွက်အချိန်ပေးခြင်းစသည့် အပန်းဖြေခြင်းနှင့်ရယ်မောခြင်း။ ထပ်ခါထပ်ခါမပြုလုပ်ဘဲအရာအားလုံးကို ပို၍ ပျော်စရာကောင်းအောင်လုပ်ရန်အတွက်အကြံဥာဏ်အနည်းငယ်ကိုရွေးချယ်ပါ အသံအချက်ပြမှု တူသရုပ်ဆောင် botones.
အဖတ်ကိုလည်း: အကောင်းဆုံး multiplayer ဂိမ်းများ
သင်၏ကွန်ပျူတာမှတင်ဆက်မှုတစ်ခုကိုဝေမျှနိုင်သည့်အချိန်တွင်၊ ပြန်လည်သုံးသပ် လူများစွာကိုတစ်ချိန်တည်းမှာရောက်ရှိနိုင်ခြင်း၏အားသာချက်နှင့်အတူအလွန်လွယ်ကူစွာ။ ဒါဟာကဲ့သို့သောရုပ်မြင်သံကြားပြိုင်ပွဲများအားဖြင့်မှုတ်သွင်းခံရဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ် "သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ချင်သူ" O "အမွေ" နှင့်အတူတကွပျော်စရာရှိသည်ဖို့ကွဲပြားခြားနားသောအဖွဲ့များရှိလူများစွာပါဝင်ပတ်သက်။ ထို့ကြောင့်ကြီးမားသောအတွေးအခေါ်နှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုပြုလုပ်ရန်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။
စက္ကူနှင့်ဘောပင်များဖြင့်ဉာဏ်စမ်းပဟေtheိများကိုဆက်လက်ဖန်တီးနိုင်သော်လည်း၊ Kahoot သင်၏အကူအညီကိုရနိုင်သည် Kahoot တကယ်တော့၎င်းသည်ရွေးချယ်နိုင်သည့်မေးခွန်းများစွာ၏တင်ဆက်မှုတစ်ခုကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းသည်လူတိုင်းကသူတို့၏ web browser မှတဆင့်မျှဝေပြီးမဲပေးခြင်းနှင့်ရေတွက်ခြင်းရသည့်အခါအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများအားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲသည်။ အခမဲ့အစီအစဉ်ကသင့်အားမေးခွန်းလွှာများဝေမျှနိုင်သည် Kahoot တစ်ချိန်တည်းတွင်လူ ၁၀ ဦး အထိနှင့်အချိန်နှင့်အချက်များကိုကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
အဖတ်ကိုလည်း: မေးခွန်းများဖြင့်အကောင်းဆုံးအသေးအဖွဲဂိမ်းများ (Android နှင့် iPhone)
ဤဂိမ်းသည်အသင်းနှစ်သင်းသည်စကားလုံးများနှင့်ပြည့်နေသောမျှဝေထားသောအွန်လိုင်းဇယားကွက်တွင်ယှဉ်ပြိုင်နေသည်ကိုမြင်ပြီးသင်၏ရည်မှန်းချက်မှာသင့်အဖွဲ့၏စကားလုံးများကိုတတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ရှင်းရန်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီကa"အလုပ်ရှင်" သူ၏အဖော်များသည်စကားများနိုင်သမျှများများကိုခန့်မှန်းရန်သဲလွန်စများပေးရမည့်တာဝန်ရှိသည်။ ဥပမာ - စကားလုံး "နေ့" ထိုစကားလုံးနှစ်ခုလုံးအတွက်သဲလွန်စဖြစ်လိမ့်မည် "အချိန်" နှုတ်ကပတ်တရားတော်အားဖြင့်ဖြစ်သည် "အလင်း"။ သဲလွန်စများများနည်းလေပိုများလေလေဘုတ်အဖွဲ့ရှင်းလင်းလေလေအောင်ပွဲခံနိုင်လေလေဖြစ်သည်။
၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်လူတို့အားမတ်တပ်ရပ်။ လှည့်ပတ်သွားလာရန်နှင့်လက်ပ်တော့တစ်ခုစီသို့မဟုတ်ဝက်ဘ်ကင်မရာတစ်ဝိုက်တွင်လူအများစုထားသည့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွင်အလုပ်လုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ အိမ်တစ် ၀ န်းရှိသတ်သတ်မှတ်မှတ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းရန်အတွက်ရတနာရှာဖွေခြင်းသည်ပိုမိုရှည်လျားပြီးပိုမိုခက်ခဲသည် (သို့) တိုတောင်း။ ပိုမိုလွယ်ကူအောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောကစားသမားများအကြားပြိုင်ဆိုင်မှုကိုမြင့်မားစေရန်အတွက်အရာဝတ္ထုများ၏ရွေးချယ်မှုတွင်ပါ ၀ င်သူများ၏အမြန်နှုန်းနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုအရအချက်များကိုပေါင်းထည့်။ နုတ်နိုင်သည်။ ကောင်းသောနေရာထိုင်ခင်း သင်စတင်ရန်သော့ချက်ကျသောအကြံဥာဏ်များစာရင်းတစ်ခုရှိသည်။
၏ blackboard မှတဆင့် အာရုံစူးစိုက်, အပိုင်း၌တွေ့ ဝေစုသင်သည် virtual version ကိုကစားနိုင်သည် အဘိဓာန်: အပြန်အလှန်အားဖြင့်၊ ဂိမ်းတွင်ပါ ၀ င်သူတစ် ဦး ချင်းစီသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘုတ်အဖွဲ့ကိုအခြားသူများနှင့်ဝေမျှပြီး၎င်းတို့စတင်ဆွဲယူလိမ့်မည်။ သင်၏ဆွဲပုံကိုထူးခြား။ လက်တွေ့ကျစေရန်အရောင်အမျိုးမျိုး၊ brush အရွယ်အစားများနှင့်အခြားအရာများကို ရွေးချယ်၍ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
လူတိုင်းနီးပါးကပိုင်ဆိုင်သည် တဉီးတည်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ငါတို့အဘို့အယခင်ကမြင်ကြပြီအဖြစ် စစ်တုရင်ဤကိစ္စတွင်လည်းသင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်မှာ၎င်းသည် configure ဖြစ်ပြီးကွန်ပျူတာကိုအတွေ့အကြုံနှင့်ဂိမ်းမျှဝေရန်နေရာတစ်ခုဖန်တီးပေးသည်။ သငျသညျနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်များလိုအပ်လိမ့်မည်, တစ် ဦး ချင်းစီအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့။ အာရုံစူးစိုက်ကစားသမားများအကြားဝေးလံခေါင်ဖျားသည့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်နှင့်ဘယ်သူကသေချာအောင်လုပ်ရမည်နည်း။
ဒီဂိမ်းဟာအသင်းတစ်ခုစီရဲ့ဘုတ်အဖွဲ့မှာကစားရမှာဖြစ်ပြီး၊ pawn လှုပ်ရှားမှုနဲ့အိမ်တွေနဲ့ဟိုတယ်တွေဆောက်လုပ်ရေးမှာပါလိမ့်မယ်။ အချို့သောအက္ခရာများသည်မှန်ကန်သည် မျှော်လင့်မထားတဲ့ဖြစ်ရပ်များ mi အခွင့်အရေး သူတို့ကပုံတူပွားခြင်းနှင့်အချို့သောဂိမ်းများသည်အလုပ်မလုပ်နိုင်သော်လည်းအရေးကြီးသည့်အရာမှာကုမ္ပဏီတွင်ပျော်စရာပျော်စရာကောင်းပြီးဝေးလံခေါင်ဖျားသည့်နေရာမှပင်ချစ်ရသူများနှင့်အားလပ်ရက်များကိုအားဖြည့်ရန်ဖြစ်သည်။
အဖတ်ကိုလည်း: အွန်လိုင်းနှင့်ဘုတ်အဖွဲ့နှင့်ဆိုင်ခန်းများ - အန္တရာယ်၊ လက်ဝါးကြီးအုပ်ခြင်းနှင့်အခြားသူများ
ဒီဂိမ်းကစားသမားအားလုံးရှိသည်ဖို့လိုအပ်သည် ဝီကီပီးဒီးယား မည်သည့်စက်ကိုမဆိုဖွင့်ပါ၊ ကစားသမားအားလုံးသည်တူညီသောအစနှင့်အဆုံးစာမျက်နှာတစ်ခုတည်းရှိရမည် - အချိန်တိုအတွင်းတစ်ယောက်မှတစ်ခုသို့သွားသောသူသည်အနိုင်ရသူဖြစ်သည်။ သော့ချက်ကျသောစည်းကမ်းမှာသင်သည် encyclopedia မှတဆင့် link များကိုနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်သာရွေ့လျားနိုင်သည် ဝီကီပီးဒီးယားထို့ကြောင့်ကစားသမားများသည်မည်သည့်ချိတ်ဆက်မှုကိုလိုက်နာရန်ဆုံးဖြတ်သည်ကိုကောင်းစွာစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။
ဒီဂိမ်းထဲမှာစိတ်ကူးစိတ်သန်းဟာအရာအားလုံးပါ။ ပါဝင်သူတစ် ဦး စီအနေဖြင့်အခြားသူများသည်အရာဝတ္ထုတစ်ခု၊ ဇာတ်ကောင်တစ် ဦး နှင့်တိရစ္ဆာန်တစ်ကောင်ကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားရန်ကြိုးစားရမည် and။ တစ်ခုတည်းသောကန့်သတ်ချက်ကမင်းရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းပဲ။ သင်ဤဂိမ်းကိုဗားရှင်းတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲရန်စဉ်းစားနိုင်သည်။ ရုပ်ရှင်သို့ဖြင့်စကားလုံးများစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်ရုပ်ရှင်ရုံ၏ခေါင်းစဉ်များကိုတုပခဲ့သည်။ ဤကိစ္စတွင်ရုပ်ရှင်ကိုအတုမလုပ်မီခေါင်းစဉ်ဖွင့်ထားသောစကားလုံးအရေအတွက်ကိုညွှန်ပြရန်နှင့်စိန်ခေါ်မှုစတင်ရန်လိုအပ်သည်။
နောက်ထပ်ပျော်စရာဂိမ်း အာရုံစူးစိုက် es သီချင်းမှန်းပါတစ် ဦး ကြင်ကြင်နာနာ Sarabanda အွန်လိုင်းကပျော်စရာနဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မယ်။ အကောင်းဆုံးကတော့ဒီမှာ icon ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် activate လုပ်နိုင်တဲ့ music sharing function ကိုအသုံးချခြင်းဖြစ်တယ် ဝေစု ထို့နောက်အပိုင်းသို့သွား အဆင့်မြင့် နှင့်ဆောင်းပါးရွေးချယ်ခြင်း ကွန်ပျူတာအသံကိုသာမျှဝေပါ။ ထိုအချိန်ကခန့်မှန်းရမည့်သီချင်းကိုရွေးချယ်သူမည်သူမဆို၏ကွန်ပျူတာမှအသံကိုအခြားလူများအားဝေမျှလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သီချင်းစတင်ရန်နှင့်ဗဟုသုတနှင့်ဂီတတုံ့ပြန်မှု၏ကြီးမားသောစိန်ခေါ်မှုတွင်မှန်ကန်သောအဖြေကိုပထမ ဦး ဆုံးရရှိရန်စောင့်ဆိုင်းရန်လုံလောက်လိမ့်မည်။
သငျသညျအနည်းငယ်တိတ်တဆိတ်တစ်ခုခုပိုနှစ်သက်လျှင် စစ်တုရင် သူတို့ပစ်ရန်လွယ်ကူသောဂိမ်းဖြစ်ကြသည် အာရုံစူးစိုက်။ သေချာတာပေါ့၊ သင်အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်စစ်တုရင်ကစားနည်းများမှတဆင့်စစ်တုရင်ကစားနိုင်သည်။ သို့သော်ဝေးကွာသောချစ်ရသူနှင့်အချိန်ကုန်ခံပြီးကစားနေစဉ်သူနှင့်စကားပြောခြင်းကသင့်အားပိုမိုနီးကပ်စေသည်။ သင်ရုံထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာဂိမ်း၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ရှိသည်ဖို့နှစ် ဦး စလုံးပျဉ်ပြားပေါ်တွင်အပိုင်းပိုင်းရွှေ့ဖို့သတိရဖို့ရှိသည်။ နှင့်အရှိဆုံးစိတ်အားထက်သန်မှုအဘို့, ကရက်ပေါင်းများစွာကစားရန်ဖြစ်နိုင်သည်: ဘုတ်၏ configuration ကိုအရပျ၌အားလုံးအပိုင်းပိုင်းနှင့်အတူထားခဲ့ပါ။ ဤသည်ကိုလည်းသင်အနိုင်ရမဟာဗျူဟာစီစဉ်ရန်အချိန်ပေးသည်!
အဖတ်ကိုလည်း: စစ်တုရင် မင်းသမီး Android, iPhone နှင့် Online တွင်အခမဲ့ဖြစ်သည်
အဆိုပါတိုးမြှင့် - အဆိုပါတောင်တက်
အတွက်လေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ်မွေးဖွားခဲ့ပြီး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း အဝေးမှအလုပ်လုပ်သောဝန်ထမ်းများအတွက် လမ်းလျှောက် ၎င်းကိုအခမဲ့ရယူလိုသူတိုင်းအတွက်ယခုရရှိနိုင်သည်။
တစ် ဦး ကဇာတ်ကြောင်းပြောအုပ်စုတစ်စု၏ပြိုင်ဘက်အသင်းများကိုခွဲခြား, ဦး ဆောင်လမ်းပြသောဆလိုက်ဝေမျှ ဦး ဆောင်သည် သင့်ကိုယ်ပိုင်စွန့်စားမှုရွေးချယ်ပါ- သင်၏အဖွဲ့သည်ညနှင့်ဘေးကင်းစွာရှင်သန်ရန်သေချာစေရန်သင်ရွေးချယ်သောလက်ငင်းစာတိုပေးပို့ရေးပလက်ဖောင်းဖြင့်အုပ်စုလိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်များချရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။
ကစားသည် Charades ဗွီဒီယိုကွန်ဖရင့်၌စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အလင်းအမြောက်အမြားလိုအပ်သောကြောင့်ဗွီဒီယိုသည်သိပ်မဆန်လှပါ။ ဂိမ်း၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာဖျော်ဖြေသူအားစိတ်ကူးစိတ်သန်းတစ်ခုပေါ်လာပြီး၎င်းကိုကျန်အဖွဲ့၏ခန့်မှန်းနိုင်စေရန်ပြုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုတွင်ပါ ၀ င်သူများသည်စောင့်ကြည့်နိုင်သည်၊ အချိန်ကိုခြေရာခံနိုင်ပြီး၊ အားလုံးသင်တန်းသားများကိုကဒ်အစုတခုရှိပါက Charades အိမ်မှာပိုကောင်းတယ်။
အဖတ်ကိုလည်း: ဘင်ဂိုကစား၊ ဘုတ်ပြားနှင့်နံပါတ်ထုတ်ယူခြင်း
နှစ်ယောက်အတွက်ဂိမ်း ၁၀ ခုသည်ကွန်ပျူတာတလုံး (သို့) အင်တာနက်ပေါ်တွင်ကစားရန် (HTML10)